September 2, 2021 - Celegroup
ရွှေ အလေးချိန် တွက်နည်း
September 2, 2021 cele group 0
ရွှေဆိုတာနဲ့လူတိုင်းကတန်ဖိုးထားတဲ့အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝတ် လက် စားအနေနဲ့သာမက ၁၆ပဲရည်(မီးလင်းအခေါက်ရွှေ)အဖြစ်လည်း ဝယ်ယူကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ရွှေကိုအနည်းနဲ့အမျှဝယ်ယူကြပေမဲ့ ရွှေတွက်နည်းကိုတော့လူတိုင်းကသတိပြုမိချင်မှပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ရွှေကိုစုဖို့ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝတ်ဖို့ဝယ်တာဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ကတွက်ပေးတာကို ကိုယ်ကသိပြီးတွက်တတ်ဖို့အတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ရွှေတွက်နည်း – ၁၆ပဲရည်တစ်ကျပ်သား ပေါက်ဈေးကို ကိုယ်တွက်ချင်တဲ့ ရွှေအမျိုးအစား တစ်ကျပ်သားဈေးအဖြစ် အရင်တွက်ရပါမယ်။ ဥပမာ ၁၄ ပဲရည် အပြင်စပ်အတွက် – 16÷18 ×ပေါက်ဈေး ။ 16÷18 × 887000=788444 ။၁၄ ပဲရည် […]
ငွေ ပါးစပ်ပေါက်မပါပေမယ့် သူပါမှ အရာရောက်တဲ့နေရာတွေမှ အများကြီးပဲ
ရှာတုန်းကသာ မနည်း ကုန်းရုန်းပြီးရှာရတာ ပြန်ထွက်သွားဖို့ကျတော့ လွယ်လွယ်လေးပဲ ငွေဆိုတာ အရာရာမဟုတ်ပေမယ့် သူမပါတဲ့အရာတွေကလဲ တော်တော်ကို ရှားပါလာပါပြီ ငွေ နဲ့ မေတ္တာကို ဝယ်လို့မရဘူး ငွေရှိရင် ဘယ်သူမဆို အနားမှာ ရှိချင်တာပဲလေ ငွေ နဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းသူငယ်ချင်းကောင်းကို ဝယ်လို့မရဘူး ဒါပေမယ့် ငွေရှိမှ ခင်ချင်ကြတာချည်းပဲလေ ငွေ နဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဝယ်လို့မရဘူး မကျန်းမာတဲ့အချိန်ကျရင် ငွေက အရေးပါတာပဲလေ ငွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဝယ်လို့မရဘူး […]
ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ လေထဲမှာပဲ ပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင်…
” ကျွန်တော်ပညာမတတ်ဘူး ” မှန်ပါတယ် ကျွန်တော်ပညာမတတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပညာတတ်တယ်လို့မလိမ်ခဲ့ဘူး သူတစ်ဖက်သားအပေါ်စာနာစိတ်ထားပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ် သူများမကောင်းကြောင်းလည်းမပြောတတ်ဘူး ကျွန်တော်အကြောင်းပဲကျွန်‌တော်စိတ်ဝင်စားတယ်မှတ်သားသင်ယူစရာတွေများတဲ့ လူလောကကြီးမှာ ကျွန်‌တော်အမှတ်မထင်ကျောင်းထွက်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဝမ်းမနည်းပါဘူး ကျောင်းကဆရာ/ဆရာမတွေသင်ပေးတာကိုတော့ပြန်ပြီး‌တော့သတိရတယ်ဗျာအပြင်လူလောကရောက်တော့လည်း ကျွန်တော်အားမငယ်ဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်စာဖတ်ရတာ ဝါသနာပါတော့ အရာအားလုံးကိုစာအုပ်စာပေတွေရှိလို့ ဖတ်လို့ရတယ်မှတ်လို့ရတယ် ကျွန်တော်ပျော်တယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် “ပညာမတတ်ပါဘူး”အားသာချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်စာအုပ်စာပေဖတ်ရတာဆိုအရမ်းပဲကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ် တစ်နေ့တော့ သူငယ်ချင်းကမေးတယ် မင်းဘာလို့ဒီလောက်စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်နေရတာလည်းလို့မေးတယ် အဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ် ငါမင်းတို့လိုပညာမတတ်ဘူး ဒါပေမယ့်ငါသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ဗဟုသုတတွေတစ်ချို့သောပညာရပ်တွေကဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်လေကွာအဲဒါကြောင့်ငါလေ့လာမှတ်သားနေရတာပေါ့သူငယ်ချင်းရာလို့ပြောလိုက်တယ်ဗျ ငါမင်းတို့လိုဆယ်တန်းမအောင်ဘူးပြောရမယ်ဆို ငါပညာမတတ်ဘူးပေါ့ကွာအဲဒါကြောင့်ငါတတ်နိုင်တဲ့စာအုပ်စာပေးအကြောင်းကိုပဲငါဖတ်ဖြစ်နေတာပေါ့သူငယ်ချင်းရာ ငါလည်းအခုမှနောင်တရနေတာ တကယ်ပါ နောင်တဆိုတာန ောင်မှရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဗျာ […]
အလွန် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေ . .တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူ မူကွဲ ၄မျိုးခန့်ကို တွေ့ရှိ…
အလွန် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေ . .တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူ မူကွဲ ၄မျိုးခန့်ကို တွေ့ရှိ အလွန် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေပါ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်သူလူထုမှ လိုအပ်နေသော ဘဏ်အပ်ငွေများကို ပြန်လည် ထုတ်ယူရာ တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူ မူကွဲ ၄မျိုးခန့်ကို တွေ့မြင်လာရပါသည်။ အဆိုးဆုံးမှာ ဖော်ပြပါ တစ်လောင်းကျပ် တန် ငွေ စက္ကူ များပင် ဖြစ်သည်။ “စာလုံးပေါင်းအမှား”။ငွေ စက္ကူများအား ယခုအခါ တရုတ်ပြည်မှ […]
လူရွင္းရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး ေတြ႔တဲ့ေနရာမွာ ေတာ္သလင္းဇာတ္ ခင္းတတ္တဲ့ အတြဲ မ်ား ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္သြားေနာ္
အသားဖြူဖြူနှင့် ငယ်ရွယ်ပျိုမျစ်သည့် အလှတရားများအား ပိုင်ဆိုင်ထားသူ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး သူ၏မျက်နှာပေါ်တွင် တန်ဖိုးအသင့်အတင့်ရှိသည့် မိတ်ကပ်ကို လိမ်းခြယ်ထားပြီး ကြက်သွေးရောင်နှုတ်ခမ်းနီကို ခပ်စိုစိုကလေး ဆိုးထားသည်။ ကျောလယ်လောက်အထိရှိသည့် ဆံပင်မှာ ဖြောင့်စင်းလျက်။ သူဆင်ယင်ထားသော အဝတ်အစားမှာ မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးလက်ပြတ်နှင့် စည်းလုံချည်လေးဖြစ် သည်။ သို့သော် သူ လက်ရှိ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေရသည်မှာ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် တရားဝင် လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ရက်ရှည်ကြာ ပေါင်းသင်းနေရသည့် အငှားမိန်းမဘဝ […]
ေနာက္မီး မလင္းပါနဲ႔ (ေနာက္မီးလင္းလို႔ လွတာ ပိုးစုန္းၾကဴးပဲရွိတယ္)
ေနာက္မီး မလင္းပါနဲ႔ (ေနာက္မီးလင္းလို႔ လွတာ ပိုးစုန္းၾကဴးပဲရွိတယ္) ေယာက်ာ္းဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ရာထူးအာဏာရွိရွိ ေအာင္ျမင္မူေတြဘယ္ေလာက္ပဲရရေ ငြေၾကးဥစၥာေတြဘယ္ေလာက္ပဲခ်မ္းသာေနေန ပညာေတြဘယ္လိုပဲတက္တက္ အရွက္တရားမရွိ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းခဲ့ရင္ အလကားပါပဲ။ ေယာက်ၤားတစ္ခ်ိဴ႕က ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္က်င့္တရား ‌ေဖာက္ျပားမူေတြကို ‌ေငြေၾကးဥစၥာေတြနဲ႔ ဖုံးဖိၿပီး ရာထူး ဂုဏ္အရွိန္အဝါေတြနဲ႔ ဆီးကာလို႔ လုံႏိုင္လွၿပီလို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ လူ႔ပါးစပ္တစ္ေပါက္ဆိုတာ ဆန္တစ္တင္းနဲ႔ဖို႔ေတာင္ မလုံႏိုင္တာ ကိုယ့္ရဲ႕စာရိတၱပ်က္ျပားမူေတြကို အမ်ားက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာသာရွိမယ္ မသိပဲေနပါ့မလား? ေယာက်ၤားေကာင္းေတြဆိုတာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ လူမျမင္ကြယ္ရာမွာ ရွိခဲ့ရင္ေတာင္ တစ္နပ္စားဥာဏ္နဲ႔ […]
အနာရွိရင္ စပ္ပါတယ္။ စပ္ေအာင္လည္း တမင္ဆားျဖဴးတာ မဟုတ္ပါဘူး
ရည္းစားျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ လင္လိုမယားလို ေနၾကၿပီဆိုရင္ အနာရွိရင္ စပ္ပါတယ္။ စပ္ေအာင္လည္း တမင္ဆားျဖဴးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေၾကာင့္ပါ။ သမီးရည္းစားေတြ တြဲတာ ၾကာလာတဲ့အျပင္ တေယာက္အေၾကာင္း တေယာက္သိၿပီး လင္လို မယားလိုျဖစ္ေနရင္ လက္ထပ္ၾကပါ။ အခ်ိန္ေတြဆြဲၿပီး တြဲေနတာ ေယာက္်ားေလးဘက္က မနစ္နာေပမယ့္ မိန္းကေလးဘက္က နစ္နာတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ ေခၚအိပ္လိုက္ ျပန္လႊတ္လိုက္နဲ႔ တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပစရာ ေယာက္်ားသာ မရွိတာ အိမ္ေထာင္သည္ မိန္းမႀကီးေတြနဲ႔တူၿပီး […]
သားသမီးတွေကို ဆုံးမတဲ့အခါ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားစေမယ့် ဒီစကား (၅)ခွန်း မပြောမိပါစေနဲ့
သားသမီးတွေကို ဆုံးမတဲ့အခါ စိတ်ဒဏ်ရာရသွားစေမယ့် ဒီစကား (၅)ခွန်း မပြောမိပါစေနဲ့ ၁။ စကားလုံးများကို လက်နက်အနေနဲ့ အပြစ်တင်ဖို့ရှက်အောင် အသုံးပြုခြင်း ဥပမာ – မင်းအသုံးမကျဘူး၊ ဟဲ မိန်းကလေးဖြစ် ပြီးပျင်း လိုက်တာ စသဖြင့် ၂။ အမြဲတမ်း ဆိုတဲ့ စာလုံးကို မကောင်းတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုခြင်း ဥပမာ – မင်းလုပ်လိုက် ရင်တော့ အမြဲတမ်း တလွဲကြီးပဲ၊ မင်းတစ်သက်လုံး ခွေးဖြစ်မယ့် ကောင်ပဲ […]
ချွေးနံ့ပြင်းတာကို လျော့ပါးစေမယ့် အချက် (၅)ချက်
ချွေးနံ့ပြင်းတာ သက်သာအောင် ဒီ ၅ ချက် မှန်မှန် လုပ်ပေးပါ.. ၁။ ရေချိုးမပျင်းဘဲ နေ့တိုင်းနေချိုးပါ။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး နှစ်ခါတော့ ချိုးပေးပါ။ ရိုးရိုးရေနဲ့ ချိုးတာ ထပ်ဖြစ်နိုင်ရင် ရေနွေးနွေးလေးလေးနဲ့ ချိုးပေးပါ။ ၂။ ရေချိုးတိုင်း အနံ့ဆိုးထွက်တဲ့ အဓိကနေရာဖြစ်တဲ့ ချိုင်းကို သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ ပိုးသတ်ဆပ်ပြာသုံးပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ၃။ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး တစ်ခုခုသုံးပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဆင်ပြေတဲ့ အမျိုးအစားချင်း မတူတာမို့ […]
“ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း” တနေ့တော့ မြေခွေးတစ်ကောင်ဟာ တောအုပ်ထဲမှာ အစာ ရှာဖွေရင်း ရုတ်တရက် တောဝက် တစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရ ပါတယ် ။ တောဝက်ဟာ သူရဲ့ အစွယ်ကြီး နှစ်ခုကို သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရဲ့ ပင်စည်နဲ့ ပွတ်တိုက်ပြီး ထက်မြတ်အောင် သွေးနေတာပါ ။ မြေခွေးဟာ မလှမ်းမကမ်းကနေ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေရင်း ပတ်ဝန်းကျင် ဘေးဘယ်ညာ ကိုလည်း တစ်ချက် ဝိုက်ကြည့် လိုက်ပါတယ် ။ […]
ပိုက္ဆံေခ်းၾကသူမ်ား မွတ္သားရန္ ပိုက္ဆံတစ္ရာ ႏွစ္ရာမွသည္ တစ္သိန္း ႏွစ္သိန္းအထိပိုက္ဆံဟာ ပိုက္ဆံပါပဲ။ အေခ်းခံရတဲ့သူက ျပန္မေတာင္းရင္ေတာင္ဒါမွမဟုတ္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရင္ေတာင္ ေခ်းတဲ့သူက အလိုက္တသိနဲ႔ ေသခ်ာျပန္ေပးရပါမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွ ေခ်းရတာေရာ၊ေခ်းေပးတာေရာကို မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ေခ်းလာတဲ့သူရွိလို႔သာ အားနာၿပီး ေခ်းေပးၾကရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကိစၥမွာလုံးလုံးလ်ားလ်ားတာဝန္ရွိသူဟာ လာေခ်းသူပါပဲ။ ပိုက္ဆံေခ်းၿပီတဲ့အခါ ေပါက္ကရေလးဆယ္ေတြကိုေလွ်ာက္မေျပာပါနဲ႔။ေခ်းထားမယ့္ကာလေက်ာ္ၿပီးျပန္ဆပ္မယ့္အခ်ိန္နဲ႔ျပန္ဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္ၾကရင္လူလိုသိတတ္ပါအေရးႀကီးဆုံးအခ်က္က ေသခ်ာျပန္ဆပ္ရပါမယ္။ ကိုယ္ကတိေပးထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေသခ်ာေပါက္ကို ျပန္ဆပ္ရပါမယ္။အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၾကန႔္ၾကာေနရင္ေတာင္ ကိုယ္ကဦးေအာင္ ဆက္သြယ္ၿပီးရွင္းျပရပါမယ္။ျပန္ဆပ္မယ့္အခ်ိန္ကို ထပ္ေျပာရပါမယ္။ ေခ်းတုန္းကေခ်းၿပီး ျပန္ဆပ္ခ်ိန္ေရာက္မွ အတိတ္ေမ့သလို […]